Nhau - Rwendo rutsva rwekubatanidzwa kwemaindasitiri, kukwazisa maoko uye kunyora chitsauko chitsva
Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd., iyo yakagadza nzvimbo dzakakwirira nguva dzese, yakaunza yakakosha nhoroondo nhoroondo. Musi waApril 12, 2021, Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd. uye Shenzhen Dental Craftsman's Home Technology Co, Ltd. zviri pamutemo Saina zano rekudyidzana chibvumirano. Zvinonzi mapato maviri aya asvika pakubvumirana pakubatana kwehunyanzvi hwekubatanidza indasitiri, kudzidziswa hunyanzvi nekusimudzira kwevanamazino, kuchinjanisa kwehunyanzvi, uye kusimudzira kwemaindasitiri.
Mukudyidzana kwakabatana uku, nhaurirano dzakadzama uye ruzivo rwekushandisa zvakaitwa mukugadzirwa kweye ese-zvedongo zirconium matombo, mazino ekugadzira denture, kudzidzisa kwehunyanzvi uye kudzidza, uye zvigadzirwa zvemazino zvakagadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Kuenderera kuburikidza kwakawedzerawo kwakadzama kutaurirana mune ese maratidziro, kwakakurudzira nguva yekuwana ruzivo rweindasitiri uye zvinodiwa nevatengi, uye zvakaita kuti zvigadzirwa zviwedzere zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi.
Bi Wenjuan, mutevedzeri mukuru maneja weShenzhen Yurucheng Dental Materials Co, Ltd. yakaunza: Kubatanidzwa kweiyo indasitiri neYurucheng neImba Yemazino, kuenzaniswa kwezvinhu zvemazino, kugoverwa kwakaringana kwezviwanikwa, kudzika kwemaindasitiri, uye kusimudzira kwemakwikwi emabhizimusi Mauto ese ane maitiro akanaka. Izvo zvine kukosha kunoshamisa mukubatanidzwa uye kupindirwa kwemaindasitiri ekumusoro uye ezasi emukati memuromo senge kugadzirwa kwemeno, kugadzirwa kwemazino, makiriniki emazino. zvinodiwa zvevatengi vekupedzisira, kuputsa zvipingamupinyi zveindasitiri, uye hunyanzvi hwekushandura indasitiri. Hapana, kushandira zvirinani vashandisi vekupedzisira zvirinani.
Liu Jianjun, Mutungamiri weShenzhen Yurucheng Dental Materials Co, Ltd. vakati: Nekuvandudzwa kweveruzhinji ruzivo rwekutaura uye mafungiro ezvematongerwo enyika kumhanyisa vanachiremba pachivande, indasitiri yemazino yakaunza mukana wakanaka wekusimudzira. Pasi pemamiriro azvino echirwere, "njodzi" uye "mukana" zvinowirirana. Tichiri kuona kukanganiswa kwedenda iri mumaindasitiri emuromo, tinofanirwa kufunga zvakadzama nezve ramangwana rekusimudzira reindasitiri yemuromo, tichitarisa pane aripo nekuisa ramangwana. “Parizvino, indasitiri yemazino yakaumba cheni yakazara yeindasitiri, iyo inoda kuti isu tipinde muchikamu chemakwikwi ane hutano pamwe nekubatana apo tichisimukira nepamhanyisa. Chete neakaenzana manejimendi ndipo panogona kuzadzikiswa kwenguva refu uye kurira kweindasitiri.